AASraw Nootropics အမှုန့်စီးရီးပေးသွင်း - AASraw အမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / Nootropics အမှုန့်
ကျနော်တို့ Nootropics အမှုန့်ပေးသွင်း powders ငါတို့သည်ငါတို့၏ Nootropics မှုန်အမှုန့်၌ရှိသမျှသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်နှင့်အတူ 98% ထက်မနည်းရှိပါတယ်, ကတိထားတော်အဖြစ်, Nootropics, ရောင်းရန်အမှုန့် powders ဖြစ်ကြသည်။
လည်းစမတ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သိမြင်မှု enhancers အဖြစ်လူသိများ Nootropics အမှုန့်, ကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး, ဖြည့်စွက်ခြင်း, သိမြင် function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်သောအခြားတ္ထုများ, အထူးသဖြင့်အလုပ်အမှုဆောင် functions များ, မှတ်ဉာဏ်, တီထွင်ဖန်တီးမှု, ဒါမှမဟုတ်လှုံ့ဆျောမှုတို့ဖြစ်ကြသည်။
ဆေးပညာအရိပ်အယောင်၏မရှိခြင်းအတွက်ကျန်းကျန်းမာမာတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်သိမှတ်ခံစားမှု-တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုမှုကိုသူတို့အသုံးပြုခြင်းကို၏ကျင့်ဝတ်နှင့်တရားမျှတမှုအပါအဝင်ပြဿနာများကိုတစ်အရေအတွက်အထိချဲ့ထားတဲ့အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နှင့်ဆေးသမားတို့တွင်အများဆုံးအခြေအတင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာများတဆိုးရွားသောကျော်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပါသည် ဆိုးကျိုးများနှင့်အခြားသူများအကြား nonmedical အသုံးပြုမှုများအတွက်ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လွှဲ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, သိမှတ်ခံစားမှု-တိုးမြှင့်ဖြည့်စွက်၏နိုင်ငံတကာရောင်းအား 1 အတွက်အမေရိကန် $ 2015 ဘီလီယံကိုကျော်လွန်သွားနှင့်ဤဒြပ်ပေါင်းများကိုအဘို့အကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝယ်လိုအားနေဆဲလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာနေပါတယ်။
Nootropics အမှုန့် powders - တစ်ခါတစ်ရံတွင်စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုခေါ် - ဦးနှောက် function ကိုမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့စိတ်ကိုတစ်ဦးအပိုထပ်တိုးပေးမယ့်ပေါ်ပြူလာလမ်းဖြစ်လာပါတယ်။ တဦးတည်းကြေးနန်းအစီရင်ခံစာအဆိုအရဦးဆောင်ဗြိတိန်တက္ကသိုလ်များမှာကျောင်းသား% 25 အထိဆေးညွှန်းစမတ်မူးယစ်ဆေး modafinil ယူ. , ကယ်လီဖိုးနီးယားနည်းပညာ startup န်ထမ်းတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားဂီယာသို့၎င်းတို့၏ဦးနှောက်တွန်းအားပေးရန် Adderall ထံမှ LSD မှအရာအားလုံးကိုကြိုးစားနေကြပါတယ်။
ငါတက်ကြွစွာငါသိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူရုန်းကန်သောအခါ, 1997 ကတည်းက Nootropics မှုန်အမှုန့်ကနေအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းနှင့်ဥရောပ (သင်အချိန်တွင်သူတို့ကိုရနိုင်ရှိရာသာရာအရပျ) မှစမတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများနီးပါး $ 1000 တန်ဖိုးရှိအမိန့်ထုတ်ခဲ့ကြရတယ်။ ငါထငျရှားအညိုရောင်အထုပ်ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ဆေးဝါးနှင့်သဘာဝတ္ထုများကယ့်ကိုငါ့အဦးနှောက်ကိုတိုးမြှင့်မယ်လို့ရှိမရှိအံ့သြသတိရပါ။
သူတို့က ပြု. , အစဉ်အမြဲငါကတည်းကအချို့သောသိမြင် enhancers တစ်ဦးကြီးတွေပန်ကာခဲ့ပါတယ်။
ငါသော်လည်း, အခြားသူများသတိထားမိပါတယ်။ "Nootropics အမှုန့် powders" နဲ့တူနေတဲ့စောင်ဝေါဟာရကိုသုံးပြီးအတူဒုက္ခသငျသညျအတူတကွအတွက်တ္ထုများအမျိုးမျိုးတို့ကိုစိမ်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ နည်းပညာအသင်သည်ထိုကဖိန်းဓာတ်နှင့်ကိုကင်းနှစ်ဦးစလုံး Nootropics မှုန်အမှုန့်များမှာ, ဒါပေမဲ့သူတို့ခဲညီမျှနေငြင်းနိုင်ဘူး။ သိသာထင်ရှားသောအန္တရာယ်များရှိများစွာသောအရာသင်တို့၏ဦးနှောက် function ကိုမြှင့်တင်ရန်ဤမျှလောက်များစွာသောနည်းလမ်းတွေနဲ့အတူ, တကကိစ္စတွင်-by-ကိစ္စတွင်အခြေခံပေါ်မှာ Nootropics မှုန်အမှုန့်ကိုကြည့်ဖို့တန်ဖိုးအရှိဆုံးပါပဲ။
1) Modafinil န်းကျင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ကျယ်ပြန့်လူသိများ Nootropics အမှုန့်သည်။ နှင့်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်: ကအာရုံစူးစိုက်မှု, နိုးနိုးကွားကွားနှင့်အာရုံစူးစိုက်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြီးထွားသိမြင်မှုစွမ်းရည်, တစ်ပြည်နယ်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ထိုကြောင့်, ကရောနှောနိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းပေါ်အာကာသယာဉ်မှူး, ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအားကစားသမားများနှင့်အမေရိကန်တိုက်လေယာဉ်လေယာဉ်မှူးများကအသုံးပြုသည်။
2) Phenylpiracetam Piracetam, မူရင်း Nootropics အမှုန့်ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Phenyl အုပ်စုတစ်စု၏ထို့အပြင်နှင့်အတူ, Phenylpiracetam 10 ဆပိုမိုအစွမ်းထက်သည်, အများကြီးပိုမြန်ဝင်သွားပါသည်။ ဤသည်ကိုပင်သေးငယ်တဲ့ပမာဏသိမှတ်ခံစားမှုနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတစ်ခုအားကြီးသော, အလတ်စား-ကြာချိန်တိုးတက်မှုများကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
3) Armodafinil မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေ။ Armodafinil Modafinil တစ်ခု Analog စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရေရှည် Episode မှတ်ဥာဏ်တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ခြင်းနှင့်ပြောင်းကုန်ပြီအလုပ်ရောဂါကနေအလွန်အကျွံအိပ်နှင့်အတူလူနာအတွက်နိုးနိုးကွားကွားအားပေးအားမြှောက်။
4) Piracetam မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေ။ Piracetam 60 dyslexic ယောက်ျားလေးများအတွက်ရေရှည် / ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ပြန်လည်ရယူခြင်းတိုးတက်လာသည်။
Piracetam ရှောင်ကွင်းခွဲစိတ်ကုသခံယူလူနာအတွက်နှုတ်နဲ့ nonverbal ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများကိုပြသ။
နာတာရှည်ကုသမှု (250 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ကိုသိသိသာသာမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်သတိမေ့ခြင်းနှင့်အတူကြွက်တွေမှာအလုပ်လုပ် memory နဲ့တိုးမြှင့်မှတ်ဉာဏ် retention ကို (+ citicoline) တိုးတက်လာသည်။
5) Oxiracetam မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေ။ အယ်လ်ဇိုင်းမားသို့မဟုတ် Multi-infarct စိတ်ဖောက်ပြန်လူနာများတွင် 800 သည်းခံစိတ်၏လက္ခဏာမနှင့်အတူ, နှစ်ကြိမ်နေ့စဉ်တိုးတက်လာသောမှတ်ဉာဏ် oxiracetam MG ။ သို့သော်အချို့သိမြင်စမ်းသပ်မှုနှောင်းပိုင်းတွင်ဇာတ်စင်နောက်ဆက်တွဲပြီးနောက်အခြေခံထက်ကစာရင်းအင်းပိုဆိုးခဲ့ကြသည်။
လူသားမြားသညျတှငျ, oxiracetam piracetam နှိုင်းယှဉ်မှတ်ဉာဏ်အချက်များအတွက် သာ. ကြီးမြတ်တိုးတက်မှုပြသထားတယ်။ ကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင် oxiracetam မှတ်ဉာဏ်အဖြစ် piracetam တိုးတက်လာသည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်လည်းစွမ်းရည်ကိုသင်ယူတိုးတက်လာသည်။
6) Pramiracetam မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေ။ Pramiracetam ဦးနှောက် degenerating ရောဂါများနှင့်သွေးကြောနှောက်နှင့်အတူလူအိုမင်းအတွက်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှုများအတွက်ကုသမှုအဖြစ်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Pramiracetam ဦးနှောက်ထဲမှာအောက်ဆီဂျင်မရှိခြင်းနှင့်အတူလူနာများ၏မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်အောင်အပေါ်တစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
7) Phenylpiracetam / Phenotropil မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေ။ phenylpiracetam / phenotropil ၏ယန္တယားဆေးခန်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတ်ပေမယ့် racetam မိသားစုထဲမှာအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများဆင်တူဖြစ်သင့်သည်။
စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းမှုန်ဝယ်ယူရန်, သေချာ HPLC သူတို့ပါရမီနှင့်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်သူများဖြစ်ကြ၏သေချာဖို့ COA နှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူသတင်းပေးပို့အောင်ကြိုးစားပါ။
β-Phenylethylamine HCL အမှုန့်